Bogga ugu weyn Waa maxay Maaliyadda Shakhsiyeed? | Hagaha Khabiirka
Waxaan hadda ku noolnahay adduun khibrad looga baahan yahay wax kasta oo aad qabato. Waxaad u baahan tahay aqoon yar oo wax walba ah si aad u noolaato. Akhriska dhaqaalaha waa dhinac ka mid ah nolosheenna oo aynaan u dhaafin xisaabiyeyaasha iyo khubarada dhaqaalaha. Fahamka dhaqaalahaaga waa arrin aad muhiim u ah safarkaaga xorriyadda maaliyadeed. Ogaanshaha go'aanka maaliyadeed ee la qaadanayo iyo sida loo qaato waa kheyraad qofna kaa qaadi karin.
Maqaalkan, waxaanu ku soo qaadan doonaa socod taxane ah oo tillaabo iyo fikrado ah si aad u fahanto waxa maaliyad shakhsiyeed ka kooban tahay. Waxaan ku siin doonaa hagitaan khabiir ku ah mawduuca si ay kaaga caawiso dheefshiidka iyo isku dheelitirnaanta tan noloshaada oo aad u ilaaliso dheelitirnaanta dhaqaalahaaga.
Waa maxay Maaliyadda Shakhsiyeed?
Maaliyadda shakhsi ahaaneed waa kelmad koobaysa dhammaan dhinacyada maamulka lacagta, oo ay ku jiraan kaydinta iyo maalgashado, Miisaaniyadda, bangiyada, caymiska, rahmadda, qorshaynta hawlgabka, iyo qorshaynta cashuuraha iyo guryaha. Weedha waxaa had iyo jeer loo isticmaalaa in lagu qeexo dhammaan warshadaha siiya adeegyada maaliyadeed dadka iyo guryaha, iyo sidoo kale bixiya la-talinta maaliyadeed iyo maalgashiga.
Waxa kale oo aad odhan kartaa in maaliyadda shakhsi ahaaneed ay khusayso gaaritaanka ujeedooyinka maaliyadeed ee shakhsi ahaaneed, sida in la haysto lacag ku filan oo lagu fuliyo baahiyaha maaliyadeed ee degdega ah, qorsheynta hawlgabnimada, ama maalgelinta waxbarashada kulliyadda ilmahaaga. Dhammaan waxay ku xiran tahay dakhligaaga, kharashyadaada, baahiyaha nolosha, iyo ujeedooyinka shakhsi ahaaneed iyo rabitaanka - iyo sidoo kale samaynta istaraatiijiyad lagu daboolayo baahiyahaas adiga oo ku jira xayiraadaha dhaqaale. Waa muhiim inaad noqoto qof aqoon dhaqaale leh si aad u kala saartid talooyinka wanaagsan iyo kuwa xun oo aad lacagtaada iyo kaydkaaga ku qaadato go'aamo xog ogaal ah.
Akhri ALSO: WAA MAXAY MAALIYAD QOF? DUGSIGA, QEEXIDA IYO SIDEE U SHAQEEYSAA?
Waa maxay Muhiimadda Maaliyad Shaqsiyeedka?
Si aad uga faa'iidaysato dakhligaaga iyo kaydkaaga, waa muhiim inaad noqoto qof aqoon dhaqaale leh. Aqoonta dhaqaale waxay kuu ogolaanaysaa inaad kala sheegto talooyinka maaliyadeed ee wanaagsan iyo kuwa xun oo aad samayso go'aamo xog ogaal ah.
Sababtoo ah kulliyado yar ayaa bixiya xiisado maamulka lacagta, waa muhiim in lagu barto aasaaska maqaallo online ah oo bilaash ah, koorsooyin, baloogyo, podcasts, ama maktabadda.
Maalgelinta shakhsi ahaaneed ee casriga ah waa fikrad cusub oo ku lug leh horumarinta tabaha sida miisaaniyad-dejinta, dejinta sanduuqa xaaladaha degdegga ah, bixinta deynta, si taxadar leh u maareynaya kaararka deynta, kaydinta hawlgabka, iyo qaar kaloo badan.
Mabaadi'da Maaliyadda Shakhsi ahaaneed
Duruufaha shakhsi ahaaneed aad bay ugu kala duwan yihiin xagga dakhliga, hantida, iyo shuruudaha isticmaalka. Xeerarka cashuuraha iyo maaliyadda way isbedbedelaan waddan ilaa waddan, xaaladaha suuquna way isbeddelaan wakhti ka dib iyo guud ahaan juqraafiga. Sidaa darteed, talo qof ku habboon ayaa laga yaabaa inayna ku habboonayn mid kale.
Marka ay jiraan xaalado adag iyo shakhsiyaadka saafiga ah, lataliyaha maaliyadeed ayaa bixin kara la-talin gaar ah. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay ku khilaafaan sheegashadan in mabaadi'da hagaya maaliyadda shakhsi ahaaneed ay isku mid yihiin iyadoon loo eegin goobta juqraafiyeed ama dakhliga.
Akhri ALSO: 30 Barnaamijyo Dakhli oo Dadban si Lacag Loogu Sameeyo Intaad Joogto | 2021
Dhinacyada Maaliyadda Shakhsi ahaaneed
Maqaalkan, waxaanu ku kala qaybin doonaa dhinacyada ugu muhiimsan ee maaliyadda shakhsiga ah oo aan mid walba si qoto dheer ugu dul istaagi doono si aad u fahanto mawduuca.
Dakhliga, kharashka, kaydinta, maalgashiga, iyo ilaalinta ayaa ah qaybaha ugu muhiimsan ee maaliyadda shakhsi ahaaneed, sida hoos lagu sawiray. mid walba oo mawduucyadan ka mid ah ayaanu si qoto dheer ugu dhex mari doonaa.
Isha soo gelida lacageed ee qofku helo ka dibna u isticmaalo si uu naftiisa iyo qoyskiisa u ilaaliyo waxa loo tixraacaa dakhli. Waa meesha aad ka bilowdo marka ay timaado qorsheynta maaliyadeed. Kuwan soo socdaa waa tusaalayaal ilaha dakhliga guud: mushaharka iyo gunnada, mushaharka, hawlgabka, iyo qaybinta.
Dhammaan ilahan dakhligu waxay dhaliyaan lacag caddaan ah, taas oo loo isticmaali karo in lagu isticmaalo, lagu kaydiyo, ama la maalgeliyo. Sidan, waxaad u malayn kartaa in dakhliga uu yahay marxaladda ugu horreysa ee socdaalkayaga maaliyadda shakhsi ahaaneed.
Akhri ALSO: Software -ka Maaliyadda Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican Sanadka 2021
Dhammaan kharashyada uu shakhsigu galo ee la xidhiidha gadashada badeecadaha iyo adeegyada, ama wax kasta oo la isticmaali karo, waxa lagu daraa kharashka (ie, ma maalgelin). Dhammaan kharashaadka waxa loo qaybiyaa laba qaybood: lacag caddaan ah (lacag-bixinaha lagu bixiyo lacagta caddaanka ah ee gacanta) iyo credit (lacag-bixinnada credit-ka lagu bixiyo) oo lagu bixiyo amaahda lacag. Inta badan dakhliga dadka badankiisu waa la kharash gareeyaa. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah ilaha kharashka ee ugu caansan: Lacag bixinta amaahda guryaha, canshuuraha, bixinta kaararka deynta, cuntada, madadaalada, iyo safarka.
Dhammaan kharashyada aan kor ku soo xusnay waxay yareeyaan cadadka lacagta la heli karo ee kaydinta iyo maalgashiga. Waxaa kuu dhimman haddii kharashkaagu ka badan yahay dakhligaaga. Waxa ay aad muhiim ugu tahay maaraynta kharashaadka si la mid ah in dakhli laga dhaliyo, dadka badankiisuna waxa ay leeyihiin koontaroolo badan oo ku saabsan kharashaadkooda marka loo eego dakhligooda. Tani waa sababta oo ah maaraynta maaliyadda shakhsi ahaaneed ee waxtarka leh oo ku habboon caadooyinka qaadashada waa lama huraan.
Akhri ALSO: Sida Loo Joojiyo Kharashaadka Lacagta: 10 Caadadood Waa inaad Hadda Joojisaa
Kaydinta waxaa loola jeedaa lacagta loo qoondeeyay maalgashiga mustaqbalka ama kharashka. Haddii dakhliga qofka uu ka bato kharashaadkiisa, faraqa u dhexeeya waxa loo isticmaali karaa kayd ama maalgelin. Maareynta kaydku waa arrin muhiim u ah maaliyadda shakhsi ahaaneed. Noocyada ugu badan ee kaydinta waxaa ka mid ah: Lacag oo ah lacag caddaan ah, xisaab bangi oo kayd ah, Samaynta jeeg xisaabeedka bangiga, iyo dammaanadaha lagu kala iibsado suuqa lacagta.
Si loo maareeyo socodka lacagta caddaanka ah iyo farqiga u dhexeeya dakhligooda iyo kharashyada muddada gaaban, dadka intooda badan waxay haystaan ​​ugu yaraan xoogaa kayd ah. Kaydka, dhanka kale, waxaa laga yaabaa in loo tixgeliyo taban sababtoo ah waxay soo saaraan wax yar ama soo noqosho la'aan marka la barbardhigo maalgashiga.
ARAG SIDOO KALE: Xisaabaadka Keydinta ee Ugu Saamaynta Badan Sanadkii 2021
Maalgashigu waa habka iibsiga hantida ee la filayo inay soo saarto faa'iido, iyada oo ujeedadu tahay in dib loo helo lacag ka badan intii markii hore la geliyay. Waxay keenaysaa khatar, mana aha dhammaan maalgashiyada inay keenaan soo laabasho wanaagsan. Tani waa meesha aan ka arki karno xiriirka khatarta-abaalmarinta.
Maalgelinta kaydka, curaarta, maalgelinta wadaagga ah, shirkadaha gaarka loo leeyahay ee hantida maguurtada ah, badeecadaha, iyo farshaxanka waa wax caadi ah.
Maalgelinta ayaa ah tan ugu qallafsan dhanka maaliyadda shaqsiga ah, sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ay dadku sida aadka ah uga raadsadaan caawinta khubarada. Khatarta iyo abaal-marinaha hantida kala duwan aad bay u kala duwan yihiin, dadka badidoodina waxay kaalmo ka raadsadaan qaybtan istaraatijiyaddooda maaliyadeed.
Ilaalinta shakhsi ahaaneed waa erey ballaadhan oo tilmaamaya waxyaabo kala duwan oo loo isticmaali karo si looga hortago dhacdo lama filaan ah oo waxyeello leh. Kuwa soo socdaa waa tusaalayaal alaabooyinka ilaalinta guud: Caymiska nolosha, caymiska daryeelka caafimaadka iyo abuurista qorshe guri
Meel kale oo ka mid ah dhaqaalaha shakhsi ahaaneed ee dadku si joogto ah u raadsadaan caawimo khabiir oo laga yaabo inay noqdaan kuwo aad u casrisan waa qorsheynta hawlgabka. Si loo qiyaaso si wax ku ool ah caymiska shakhsiga iyo baahiyaha qorshaynta guryaha, waa in la dhamaystiraa gorfaynta.
Habka Qorshaynta Maaliyadeed ee Shakhsi ahaaneed
In la lahaado qorshe adag oo lagu adkaysto waa furaha maaraynta maaliyadeed ee wanaagsan. Miisaaniyad ama qorshe maaliyadeed oo rasmi ah ayaa dabooli kara dhammaan dhinacyada kor ku xusan ee maaliyadda shakhsi ahaaneed. Bangiyada gaarka ah iyo lataliyayaasha maalgashiga ayaa ah dadka ugu badan ee abuura qorshayaashan. Waxay la shaqeeyaan macaamiishooda si ay u fahmaan baahiyahooda iyo yoolalkooda oo ay u horumariyaan xeelad iyaga u shaqeysa.
Kuwa soo socdaa waa qaybaha aasaasiga ah ee habka qorshaynta maaliyadeed guud ahaan:
Samee qorshe horumarineed.
Kormeerka iyo dib u qiimaynta
Xeeladaha Maaliyadeed ee Shaqsiga
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u bilowdo qorshaynta maaliyadeed, way ka sii fiicnaan doontaa, laakiin marnaba aad daah uma aha inaad dejiso yoolal maaliyadeed kuwaas oo siin doona badbaado maaliyadeed iyo madax-bannaani adiga iyo qoyskaaga. Waa kuwan qaar ka mid ah dhaqamada iyo talada ugu wanaagsan ee maaliyadda shakhsi ahaaneed.
Ku noolaanshaha awoodaada iyo kaydinta kugu filan si aad u fuliso hadafyadaada fog waxay u baahan tahay miisaaniyad. Istaraatiijiyada miisaaniyadeed ee 50/30/20 waa bar bilow cajiib ah. Sidan ayaa loo kala jabiyay:
Kirada, yutiilitida, raashinka, iyo gaadiidka waxay isticmaalaan 50% mushaharkaaga guriga ama dakhliga saafiga ah (canshuurta kadib).
Kharashyada ku meel gaadhka ah, sida wax-ka-cuntada iyo ka-soo-kabashada dharka, waxay helayaan 30% miisaaniyadda. Waxa kale oo aad halkan ku bixin kartaa deeqaha samafalka.
20% ayaa loo qoondeeyay mustaqbalka, sida bixinta deynta iyo kaydinta degdegga ah.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo sahlan in la isticmaalo iyo software online kuwaas oo kaa caawin kara inaad miisaaniyada lacagtaada oo aad maamusho kharashkaaga.
2. Meel u dhig lacag xaalad degdeg ah
Waa muhiim in "horta naftaada bixi" si loo dammaanad qaado in lacagta loo qoondeeyay kharashaadka aan la filayn sida biilasha caafimaadka, dayactirka baabuurta weyn, kharashyada maalinlaha ah haddii aad lumiso shaqadaada, iyo wixii la mid ah. Shabakadda badbaadada ugu wanagsan waa kharashaadka nolosha ee saddex ilaa lix bilood. Inta badan khubarada maaliyadeed waxay ku taliyaan in meel la dhigo 20% jeeg kasta oo mushahar ah bil kasta. Ha joojin kaydinta marka aad dhisto lacagtaada degdega ah. Sii wad u qoondaynta 20% ee dakhligaaga bishii yoolalka kale ee maaliyadeed, sida sanduuqa hawlgabka ama lacag-bixinta guriga.
Akhri ALSO: Nuqul ka samee Liisaska Kharashyada Billaha ah oo hubso inaad wax badan keydsato
3. Daynta ha yaraato
Waxay u muuqataa mid sahlan: ha ku bixin wax ka badan inta aad sameyso si aad uga fogaato inaad deyn gasho. Dhammaan, dadka intooda badan waa inay amaahdaan waqti ka waqti, iyo gelitaanka deynta waxay noqon kartaa faa'iido xaaladaha qaarkood - tusaale ahaan, haddii ay keento hanti hanti. Qaadashada amaahda guryaha iibso guri waa hal tusaale. Iyadoo aan loo eegin haddii aad guri kiraysato, baabuur kiraysato, ama aad iibsanayso barnaamij kombuyuutar, kirayntu inta badan waxay noqon kartaa mid ka kharash badan iibsashada gabi ahaanba.
Kaararka amaahda Waxay noqon kartaa dabinno deyn oo muhiim ah, haddana deegaanka maanta, suurtagal maaha in mid la waayo. Waxa kale oo loo isticmaali karaa ujeedooyin aan ahayn gadashada alaabta. Ma aha oo kaliya muhiim u ah dhisida buundada credit, laakiin sidoo kale waa hab cajiib ah si aad ula socoto kharashkaaga, kaas oo kaa caawin kara inaad ku dhegto miisaaniyad.
5. Ka fikir qoyskaaga
Samee dardaaran oo, iyadoo ku xiran baahidaada, samee hal ama in ka badan si aad u ilaaliso hantidaada oo aad u hubiso in rabitaankaaga la fuliyo markaad geeriyooto. Waa inaad sidoo kale tixgelisaa caymiska baabuurta, guriga, nolosha, naafanimada, iyo caymiska daryeelka muddada-dheer (LTC). Sidoo kale, si joogto ah u qiimee siyaasaddaada si aad u hubiso inay sii socoto ku habboonaanta baahiyaha qoyskaaga marka ay soo maraan marxaladaha muhiimka ah ee nolosha.
FAQs ee Maaliyadda Shakhsi ahaaneed
Waa maxay sababta aan ugu baahanahay inaan qaato xeeladaha maaliyadda shakhsi ahaaneed?
Qaadashada istaraatijiyad maaliyadeed shaqsiyeed si wax ku ool ah waxay kaa caawineysaa inaad miisaaniyad u sameyso kharashyada, kordhiso heerka kaydkaaga ee hawlgabka, iyo inaad sameyso doorashooyin maalgashi oo taxaddar leh oo kaa caawin doona inaad gaarto yoolalka maaliyadeed.
Waxaan aaminsanahay in maqaalkani uu ahaa mid xog badan leh oo iftiiminaya. Fadlan samee si fiican inaad raacdo awaamiirta ku jirta qoraalkan maadaama ay faa'iido badan u yeelan doonaan adiga iyo dhaqaalahaaga. Waad ii mahadcelin doontaa hadhow markay sameeyaan.
Hayso safarka dhaqaale ee ugu faa'iidada badan.
Sida Looga Badbaado Hoos U Dhaca 2022 | 7 Siyaabood oo Aan La Furin
Dunidu si wayn ayaa isu beddeshay,sabato ah saamaynta hoos u dhaca. Oo waxaad ka heli kartaa…
20-ka Urur ee Xawaaladda Caalamiga ah ee ugu Fiican
Muhiimadda xawaaladaha caalamiga ah ayaa ku sii kordheysa heer naxdin leh. Tani waxay sabab u tahay…
Waa muhiim inaad u diyaargarowdo dhammaan macluumaadkaaga cashuurta sida ugu dhakhsaha badan (taasoo macnaheedu yahay inaad…
15 Talooyin loogu talagalay Maal-gashadayaasha Suuqa Bilowga ah
Maalgelinta waa hab aad lacagta meel iska dhigto marka aad ku mashquulsan tahay waxyaabo kale oo ay shaqeyso...